Misaotra Intel | Avy amin'ny Linux
pandev92 | | fampiharana, About us
Hanomboka amin'ny fanazavako aho fa hevitra manokana ihany io ary mety ho zarazaraina bebe kokoa. Fantatry ny rehetra aho fa efa crybaby an'ny amd efa ela, imbetsaka aho no nitaraina teto fa tsy mandeha tsara ny radeon 4650-ko, fa nisy olana maro ary na dia nanana ny fivelaran-tany 3d tsara aza izy, raha ny fanafainganana 2d , Nanana fahombiazana tena ratsy foana aho niaraka tamin'ireo mpamily tompony, izay nahitsy kely tamin'ny mpamily maimaimpoana.
Ka tamin'ny herintaona, tamin'ny volana desambra, no nanapahako hevitra hividy sy hanangana solosaina vaovao tsikelikely, izay niasan'ny zava-drehetra tamin'ny voalohany ary afaka niaina tamim-pilaminana aho. Tamin'ny farany dia nividy pc niaraka tamin'ny Intel core i5 3570k aho ( Intel hd4000) ary nvidia gt620, hahafahana mitsapa ny tsy fitovizan'ny olona maro izay nanoro ahy nvidia, no nanohana ahy.
Farany taorian'ny fitsapana sy fitsapana maro, dia niafara tamin'ny fijeriko ireo sary Intel aho, gaga indrindra noho ny zava-bita azoko tamin'ny chakra sy kwin, nefa tamin'izany fotoana izany koa faly tamin'ny fampisehoana tany Ubuntu, izay nahafahako nitsapa lalao toy ny tf2, ny amnesia sy ny hafa, tsy misy olana ary tsy dia misy fps kely, raha oharina amin'i nvidia.
Ka hoy aho, misaotra an'i Intel amin'ny asa rehetra, misaotra tamin'ny fisokafan'ny mpamilinao, misaotra ny fifanarahana amin'ny vaapi, miaraka amin'ny fihomboana 2d tsara, amin'ny fanavaozana matetika, misaotra satria azoko atao ny mampiasa ny vokatra rehetra an'ny mplayer nefa tsy mandrovitra sy misaotra noho ny famahana farafaharatsiny farafaharatsiko, ny famiravira (chakra).
Aorian'izany rehetra izany dia manontany tena aho hoe tena mendrika tokoa ve ny mividy sary nvidia fanampiny, miaraka amin'ny rindrambaiko ananantsika amin'ny Linux? Ny sary Intel hd3000 / 4000 dia manao ny asany lavorary ho an'ireo izay tsy te handany vola be, satria tsy vitan'ny icore fotsiny, fa koa ao amin'ny tetezana Intel Pentium ivy.
Ny sary Intel ihany no ahafahanao mampiasa distro maimaimpoana ary manana ny hafainganam-pandeha tsara indrindra nefa tsy manao tweaks an'arivony, ary tsapa ny fahatsapana fa mandeha fotsiny ny zava-drehetra, fa ny kernel dia tsy hanimba ny sary-ko ary izany Isaky ny kernel tsirairay avy dia mahazo fanatsarana lehibe maro aho, tsy voavidim-bola izany.
Ka tsy afaka milaza afa-tsy aho, misaotra Intel ary misaotra anao amin'izay omenao ny Open Source!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Misaotra Intel
Viva sisin'ny sary 765
efa manana ny fanafainganana 3D amin'ny Linux?
Heveriko fa samy tsy manana na manana aho.
fanesoana io hahaha
enuco dia hoy izy:
Nanana karatra nvidia foana aho tao amin'ny masinina linux ary tsy mbola nanana olana na dia mametraka ny mpamily foana aza aho amin'ny alàlan'ny fampidinana azy ireo mivantana avy any nvidia.
Mamaly an'i enuco
YAFU dia hoy izy:
"Tena ilaina ve ny mividy sary nvidia fanampiny, miaraka amin'ny rindrambaiko ananantsika amin'ny Linux?"
Raha toa ka mendrika nVidia tsara (mpamily tompona trano) raha toa ka mampiasa ohatra Blender amin'ny alàlan'ny GPU (Miaraka amin'ny toolkit CUDA). Toy izany koa amin'ny programa hafa izay mahazo tombony amin'ny fanafainganana GPU. Ary heveriko koa fa raha ny fahombiazan'ny lalao be fangatahana no resahina dia taraiky lavitra be i Intel. Intel amin'ny sehatry ny sary dia mbola lavitra ny fomba hahatratrarana ny fifaninanana (ary faly aho tamin'ny tsaho fa hividy nVidia i Intel). Na ny AMD APU tsara indrindra aza dia mahomby amin'ny Intel indrindra amin'ny 3dMark mihoatra ny indroa.
Saingy manome tanteraka ny fanohanako an'i Intel aho amin'ny fitazonana mpamily maimaimpoana. Na ny CPU manaraka aza dia ho i5-3570k na i7-3770k ihany koa, ary manantena aho fa hanana traikefa amin'ny mpampiasa tsara raha ny sary sy ny stationery no resahina.
Saika offtopic PS: Vitanao ve ny nanisy overclock ny 3570k amin'ny GNU / Linux, sa voafetra noho ny fetran'ny kernel?
Valio amin'i YAFU
Overlocked aho ary tsy nanana olana oO
Mba hanamafisana fotsiny, efa notsapainao ve fa mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha overclocking ao amin'ny GNU / Linux ny mic?
Satria ny zavatra iray dia ny amin'ny fikirakirana BIOS dia efa nanampatra azy io isika, fa ny zavatra iray hafa dia ny mamela ny GNU / Linux hiasa amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa noho ny "mamaky" amin'ny asa azo antoka.
Amin'izao fotoana izao raha ny fahitako azy dia mihazakazaka amin'ny 4,2 Ghz, noho izany dia heveriko fa marina ny zava-drehetra 😛
Ok, milamin-tsaina aho ary mandany dolara vitsivitsy amin'ny CPU tsy azo adino amin'ny andiany «K» 😉
Manana ny famandrihako aho momba ny fampiasana ny famaritana toy ny CUDA izay tompony ary azon'ny NVIDIA ampiasaina ihany, aleoko ny Opencl hatreto
Eny, aleoko foana ny famaritana misokatra sy / na ny fampiharana. Vakio anefa fa "aleoko" tsara. Raha mifangaro amin'ny CUDA amin'izao fotoana izao dia manararaotra ny OpenCL ny fandikana ara-potoana, satria mampiasa CUDA aho.
Na eo aza izany dia miloka amin'ny OpenCL aho ary izany fotoana izany dia hafoina amin'ny fampiharana tsara kokoa.
Etsy andanin'izay, raha ny fahalalako azy tsy misy lalao takiana avo lenta amin'ny Linux, ary raha tonga izy ireo, raha te-hihazakazaka i intel, dia teo am-baravarankely sy mac aho, nilalao 1920 x 1080, samy mainty ops2 sy 1 (ity teo amin'ny mac) , ho an'i batman city arkam, miaraka an-tsipiriany eo anelanelany, ary nijanona foana aho tamin'ny 30 fps, ary raha ampiriminao kely io dia mahatratra 40 ianao sy 90% amin'ireo mpampiasa izay tsy kilalao, izay mpilalao indraindray, Tonga any amin'izy ireo izy mba hitsitsy. Tokony hanatsara ny latabatra 3d ao Linux fotsiny izy ireo.
Tsy gamer aho, milaza ny marina aminao aho. Raha mbola nametraka lalao aho dia tsy maintsy natao mba hitsapana fitaovana vaovao fotsiny, fa mbola tsy nilalao azy ireo mihitsy.
Fa tsy haiko raha mahafantatra "gamer" ianao. Tian'izy ireo ny lalao farany misy amin'ny FullHD miaraka amin'ny toerana amin'ny antsipiriany ultra sy amin'ny fps tsara. Eny, ny marina ankehitriny dia tsy manana Hardware i Intel izay afaka manome fahafaham-po ireo toetra ireo.
Tsy fantatro koa raha misy lalao izay mitaky be dia be izao ao amin'ny GNU / Linux, saingy azoko antoka fa amin'ny fahatongavan'i Steam (by the way, lalao tsy miankina) dia hisy izany.
Gamer xD aho, ary rehefa te-hilalao amin'ny windows amin'ny ultra hd aho dia raisiko ny radeon 7870-ko ary apetrako, fa amin'ny ankapobeny dia manana intel betsaka aho, kely kokoa ny laniny ary milamina ny zava-drehetra ^^. Ny lalao valve dia tsy lalao mitaky be dia be, tsy misy.
Idem. Tsy maintsy niresaka fotsiny ianao fa miaraka amin'ny fanatsarana ny fahombiazana sy ny fitoniana isaky ny famoahana dia manana fanohanana tsara lavitra noho ny mpiara-miasa aminy Windows izy ireo. Na dia tiako aza ny AMD, raha mbola manohy mampiasa Linux isan'andro aho dia tsy hieritreritra indroa ary hisafidy Intel.
Lahatsoratra sarobidy! 😀
Ny mpanoratra dia INTEL
Vazivazy, fa na dia tsy nanana olana tamin'ny Integrated aza aho dia misy tsara kokoa.
Eny, toy izany misaotra NO.
Ireo orinasa ireo dia tsy manao na inona na inona hanao asa soa, mahita fotoana iray amin'ny tsena tsinontsinona an'ny AMD izy ireo ary misy fotoana fohy avy any Nvidia.
Saingy tsy misy isalasalana fa ny fanoloran-tenan'ny Intel amin'ny GNU dia mifanaraka amintsika rehetra.
Manantena aho fa hisy vokany ny fahitan'izy ireo tsara, satria i Nvidia izao dia mijery tsara an'i Steam amin'ny iray amin'ireo toerana malaza indrindra izay afaka manome ny mofomamy ny manaikitra lehibe indrindra.
Avelao aho hijery raha azoko. Ka na dia manao asa tsara ianao ary manao izany amin'ny rindrambaiko openource ... "misaotra fa tsia"? ... Ny tiako holazaina dia hoe, raha tsy manao izany amin'ny fomba feno fitiavan-tena sy maha-olombelona izy ireo, dia tsy manisa ny asa, sa tsy izany? satria izay no tiana hambara.
Raha ny fahalalako azy dia tsy misy orinasa mankasitraka, samy maniry ny ampahan'ilay pizza izy ireo ary na dia azoko tsara aza, na ny asako sy ny vokatro dia natao ho fanasoavana ny olombelona ... natao ahazoana vola izy ireo ary hanatsarana ny haavon'ny olona amin'ny lafiny X.
Ny hevitra tiako ho lazaina dia tsy hoe tsy manaiky ny asany izy na manome azy na tsy manome lanja azy.
Saingy manomboka amin'izany ka hatrany amin'ny fanomezam-boninahitra azy noho ny fanaovana izay vinan'ny vinan'ny orinasany dia mbola lavitra ny lalana.
Amin'ny fomba tsy ahafahako misaotra ny governemantan'ny tanànako tamin'ny fanamboarana ny jiro ampahibemaso eny amin'ny arabe onenanay, avia, na manampy betsaka ahy aza izany, izany no asan'izy ireo.
Ireo fanekena dia mankany amin'ireo rehetra izay manao zavatra ho an'ny tombontsoa iraisana nefa tsy voatery ary tsy misy tambiny.
Ho an'i Intel ny fankasitrahako ny fahitany sy ny fanjifana ny vokatra vokariny.
Ny maha samy hafa azy dia ny laharam-pahamehan'ny orinasa hikarakara ny tombotsoany
Heveriko fa fihetsika mahafinaritra izany, raha hiteny aho misaotra satria amin'ny dingana ataonao dia mandray anjara amin'ny vondrom-piarahamonina iray izay manana olana maro ianao
Azoko tsara anefa ny hevitrao
Orinasa ireo, manao izay ataony izy ireo, tsy manantena fisaorana fa tapakila, nahoana isika no tokony hisaotra azy ireo?
Uff, farany misy hevitra misy masontsivana.
Intel dia hoy izy:
Tongasoa ianao, misaotra anao matoky ahy 😉
Valio amin'i Intel
Hahahahah, xD mahafinaritra
Manana ny solosainako amin'ny chip intel aho, ity no ampiasaiko izao, ary ny marina dia miasa tsara kokoa ny pc-ko miaraka amin'ny Nvidia Privative miaraka amin'ny gt 440, amin'ny duo 2 core 3..2Ghz, mandeha tsara lavitra noho ilay solosaina finday i3 2310M miaraka amina mpamily intel , na dia ny fahamarinana aza ny intel dia manana fampifanarahana tena tsara.
Ralehilahy, ny gt440 tsy ambany farany! Toy ny milaza fa ny solosaina finday misy radeon 5670 dia mihazakazaka tsara kokoa noho ny intel ... koa, intel manana sary HD3000 ..., izay tsy matanjaka tahaka ny 4000
biker dia hoy izy:
Nvidia vao haingana dia namoaka teknolojia vaovao antsoina hoe optimus, izay ao anaty karatra video misy 2: intel sy nvidia (ao anatin'ny nvidia daholo). Ao amin'ny windows rehefa tsy mitaky sary be dia be ny rindrambaiko dia mampiasa intel izy, ary rehefa nosokafana ny rindrambaiko izay mila sary marobe dia mampiasa nvidia ilay programa. Ity dia bebe kokoa ho an'ny solosaina finday, satria mamonjy angovo betsaka ianao amin'ny tsy fananana nvidia mifandray foana 😉 ho an'ny linux dia mbola tsy mandeha tsara ireo karatra ireo 🙁 teraka ny tetikasa antsoina hoe bumblebee izay manandrana manao an'io, ary raha ny marina dia efa mandeha tokoa! fa tsy mandeha ho azy; mila manokatra ireo programa milaza ianao fa hanokatra azy amin'ny intel na nvidia (:
azonao atao ny manamarina bebe kokoa eto: https://fedoraproject.org/wiki/Bumblebee
Valiny amin'ny bisikileta
Nampiasa Intel foana aho .. angamba izay no ahalalako ilay fitoniana lazainao io ..
Tsy maintsy ampitahako ny roa, ary na dia EXCELLENT amin'ny mpamily aza ny sary Intel, raha ampitahanao amin'ny gt620, izay iva farany ambany, dia azo antoka fa aleon'i Intel satria samy manome fampisehoana mitovy aminy, saingy manana mpamily maimaimpoana tsara kalitao kokoa. , efa fantatrao izay ho fidinao.
Zavatra tsy mitovy raha ampitahanao amin'ny GPU avo lenta.
Ho fanampin'izany, miankina amin'ny PC anananao, ho haingana kokoa ny GPUs (zavatra toy ny fahatsiarovana DDR5 sy izany) ho an'ireo mpamily fananana bebe kokoa izay tsy maintsy apetraka (Ary misaotra fa ireo nVidia dia tsy manome olana betsaka toy ireo AMD).
Ami the g620 dia nahafaty ahy tamin'ny compiz ny marina ary tsy afaka nampiasa vdpau tamin'ny maodin'ny varavarankely aho, tamin'ny efijery feno fotsiny, fa hiadana kosa ny pc iray manontolo :(, ratsy ihany koa ny windows, fa hoy aho, nanarona azy tamin'ny alàlan'ny fiovan'ny gpu asus aho ary mendrika kokoa izany na tsia ...
Manana nvidia gt520 amin'ny OS debian 64-bit aho ary hiteny aza aho fa mitovy amin'ny Windows izy io miaraka amin'ireo mpamily fananana hita ao amin'ny repositories debian.
Tena heveriko fa tsy azonao atao ny mampitaha ny herin'ny sary nvidia amin'ny intel, izay ao anatin'ny microprocessor ihany koa.
Te hahafantatra aho hoe manao ahoana ny traikefa ao amin'ny linux an'ny amd miaraka amin'ireo sary ao amin'ny micro, izay avy amin'ny zavatra azoko, amin'ny alàlan'ny fametrahana karatra sary ati-doha fa tsy fanafoanana dia mifameno izy ireo
Raha ny marina ny gt520 dia ao amin'ny 600, 610, ka tena mahantra. ary amin'ny benchmark rehetra dia ho hitanao fa ao ambadiky ny intel hd4000 io
Eto ny fitsapana
Eny, sary APU + "discrete" no tianao holazaina. Manana ekipa "htpc" fotsiny aho izay mbola tsy vitako ny fananganana azy, izay kasaiko hizaha toetra ny lazainao amin'ny Apu Trinty A6 + a Radeon HD6670 ... Manana fanontaniana mitovy aminao ihany aho.
Satria tsy tokony hilalao kilalao mavesatra aho, dia mifanaraka tsara amiko ny intel
Nampiasa AMD foana aho, satria tiako ny milalao lalao. Tsy teraka tao amin'ny Linux aho, manandrana mampiasa fitaovana open source izay mitovy amin'ny an'ny tompona Windows.
Vao tsy ela akory izay dia nametraka Kubuntu 12.10 x64 aho ary nametraka ireo mpamily AMD, miaraka amin'ireo fampianarana avy amin'ny wiki tsy ofisialy ho azy ireo. Milamina ny zava-drehetra ho ahy, afaka milalao loharano fanoherana tsy mitokona aho, 150-300 fps ary ny mari-pana tsara (56 ° C)
Tsapan'izy ireo tsikelikely ny tsena izay nitombo tao amin'ny Linux, ary hihatsara ireo mpamily, na heveriko fa.
Ny intel ratsy loatra dia tsy mivoaka miaraka amin'ny takelaka fanafainganana (feno), miaraka amina fampisehoana mitovy amin'ny radeon 7950 na tsara kokoa, na mpamatsy puce graphics ho an'ny assembler tsara, toa ny msi na gigabyte
Aza mino an'io, ho hitantsika ny fampanantenan'ny mikrosesy intel vaovao, ny hanswells, amin'ny zavatra lazain'izy ireo.
Manaiky aho, amin'ireto fotoana ireto izay tena mahaliana ny GNU / Linux, ny anton-javatra afaka mamaritra ny mpandresy dia ny fanatsarana fitaovana amin'ny alàlan'ny Intel hanana sary afaka mifaninana amin'ny avo lenta an'i Nvidia, (ary isaky ny Misy andiana processeur vaovao mivoaka, hita fa mandroso tsikelikely) ary manatsara na mamoaka mpamily an'i Nvidia.
Ny orinasa izay miloka betsaka indrindra amin'ireo faritra ireo no ho mpandresy tsy azo iadian-kevitra, satria eto amin'ity tontolon'ny rindrambaiko maimaimpoana ity dia mandray fanapahan-kevitra bebe kokoa ny olona rehefa mividy ny fitaovany fa tsy amin'ny fanaovana dokam-barotra fotsiny.
Tsy hanao sary mahery vaika toy izany mihitsy izy ireo, satria 600 Euro xD, 200 +400 amin'ny sary no ampiasaina, fa tsy ny sehatry ny mpampiasa tadiavin'i Intel, tadiavin'i Intel ilay mpampiasa izay tsy mila sary matanjaka be.
raha ny habetsaky ny fandehan'ny zavatra mandeha amin'ny cpz ao anatin'ny 1 taona dia tsy dia matanjaka izany raha oharina amin'ny hafa, ary mety ho safidy fividianana tsara izany, raha tianao izany dia azonao atao, betsaka ny mpividy liana, betsaka kokoa raha malalaka tanteraka izany, fa raha misy ny vidiny Tena zava-dehibe, ny satrony dia tokony ho 120 euro, nefa tsy manary kalitao amin'ireo singa rehetra ao aminy. maimaimpoana ary tena mahomby. firy ny zavatra mety ho avy amin'ny zavatra toy izany.
Marina, fa efa misy ny olona mandoa sarany mitovy amin'ny Intel CPU + Nvidia GPU mitambatra. Azo antoka fa tsy haharitra izy ireo raha toa ka mampiditra ilay mpamily maimaim-poana avy any Intel.
Miankina amin'ny fitaovana rehetra ananan'i Intel amin'ny ho avy ny zava-drehetra.
Hividy am-pifaliana karatra horonantsary intel natokana aho
Mihazakazaka miaraka amin'ny fampisehoana farafaharatsiny 7850 aho http://www.gpureview.com/Radeon-HD-7850-card-678.html
Ny andro izay hitranga!, Intel i5, dia tsy handoa 200 euro, fa 300….
Tena mahaliana ny hevitrao, ary azo antoka fa lahatsoratra hitondra rambo 😀
Manana fanontaniana iray fotsiny ho an'ny mpanoratra ity lahatsoratra ity aho:
Rehefa miteny ianao hoe "azo zaraina" dia midika hoe "zaraina"? Satria ny teny toy izany dia tsy misy amin'ny teny espaniola, amin'ny teny italiana ihany (ary izay no mitranga dia tsy manana 'i'), farafaharatsiny eo amin'izao tontolo izao.
Italiana aho, azo atao tanteraka ireo lesoka ireo ...
Tena marina ny anao. Nanana sary intel hatramin'ny taona 2007 aho, ary mahafinaritra izany. Tsy dia tadidy loatra izy io, ary mora vidy tokoa, saingy lalao vitsivitsy no ratsy ho ahy rehefa mampiasa windows, ary tsy mbola nanana olana tamin'ny fiakaran'ny sary tamin'ny rafitra fiasa rehetra aho. Na amin'ny mpamily, na amin'ny fahefana na amin'ny zavatra hafa, amin'ny fahatsoram-po, Intel, dia nahavita azy ary antenaina fa amin'ny taona 2014 miaraka amin'ireo processeur sy sary ho avy, dia hitohy toy ny teo aloha ny zava-drehetra, saingy tsara kokoa.
Mamaly an'i charlie
Gazety TuxInfo # 56 misy
KDE: tongasoa eto amin'ny birao semantika (fizarana 1)